Soo-saareyaasha Alaabada - Warshadaha Shiinaha & Shirkadaha Alaabada - Qaybta 2
Daboolka Daboolka Laaban Laaban Yahay Koofiyadda Qorraxda ee Socodka Dibedda
Ilaalinta Qorraxda oo Taam ah: Tan koofiyadda qorraxda ee laaban karo lagu sameeyay UPF 50 + UV qorraxda ilaalisa taas oo xannibaysa 98% falaadhaha UV-ga ee waxyeelada leh. Kuweena Ilaalin koofiyadaha qorraxda waxay ka ilaalin doontaa wajigaaga, qoortaada iyo dhegahaaga falaaraha qorraxda ee waxyeelada leh
Miisaan Culus iyo Neefsasho: Ka samaysan polyester tayo leh oo miisaankiisu fudud yahay, la laaban karo isla markaana aan biyuhu xirin karin; dhinacyada mesh neefsan kara socodka hawada ee wanaagsan taas oo ka dhigaysa madaxaagu inuu ahaado mid qabow maalmaha kulul
Bannaanka Madaxa Kabaha Koofiyadaha Qarsoon ee Mesh Sun Hat for Men Women
SHAQADA LABAAD: The qarsoon mesh hat hat wuxuu ka kooban yahay shabakad mesh mesh qarsoon oo dusha sare ah kaasoo qarinaya waardiye buuxa ee cayayaanka kaneecada. Si fudud u soo jiido, ku hagaaji cabirka madaxaaga waxaadna si buuxda ugu diyaar garoobeysaa inaad ku raaxeysatid waxqabad banaanka ah adigoon kaneeco, duqsiyo, cayayaan iyo cayayaan dhibi karin. Koofiyad ka hortagga kaneecada ama Sun
Calaamada Ragga Aabaha Suufka Baseball-ka
Bakhaarka Koofiyadaha men logo dxayeysiis cotton bkubbadda cagta caps - Daboolkan xiisaha leh ee caadiga ah ayaa qumman dabool meel kasta oo aad tagtid. Tanidabool wuxuu isku daraa labada nooc ee midabada leh si aad madaxaaga u jeediso iyo raaxada aad hesho maalin dhan. Waxaad u isticmaali kartaa howlahaaga caadiga ah ee maalinlaha ah. Waa Inuu Leeyahay Shey!
TAYADA PREMIUM - 100% cudbiga ayaa ka dhiga, mid raaxo leh oo raaxo leh oo ku habboon, gaar ahaan howlaha maalinlaha ah. Marka, ma rabto inaad iska bixiso. Dharka suufka ah ee wanaagsan ayaa ka ilaaliya maqaarka xasaasiga ah Ultraviolet. Sidoo kale, suufka jilicsan ayaa ka dhigaya mid la qaadan karo oo la burburin karo, sidaa darteed meel walba waad u keeni kartaa si fudud. Ku Yimaad Midabyo Kala Duwan.
Astaanta Calaamadda Calaamadda Calaamadaha Baaldiga ee Kalluumeysiga
1.Waxyaabaha, midabada, qaabka iyo qeexitaanka koofiyada baaldiga waxaa lagu sameyn karaa si waafaqsan baahidaada. 2. Koofiyadaha taxanaha: Koofiyadaha baaldiga, Koofiyadaha Isboortiga Dibedda, Koofiyadda Xayeysiinta, Kubadda baseball, Kabtanka Milatariga, Mesh Cap, Kid's Cap, Jiilaalka Qaboobaha, Daboolida Buugga Camouflage, Koofiyad Dhaqeysan, Koofiyad Fisherman iwm. 3 Waxaan ugu jawaabeynaa si waafaqsan weydiimahaagii ugu dambeeyay 12 saac gudahood. 4. Waxaa laguu dammaanad qaadayaa tayada la isku halleyn karo iyo adeegga iibka kadib, waxaad ku farxi doontaa inaad ogaato in toos nooga soo dejinta ay tahay mid aad u fudud oo fudud sida aad uga iibsato alaab-qeybiyeyaasha maxalliga ah laakiin leh qiime aad u macquul ah iyo xulashooyin badan.
<< <Hore 12